အသက်ကယ်တြိဂံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးမှုအများဆုံးသည် အရာဝတ္ထုများ ပြုတ်ကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
အသက်ကယ်တြိဂံနည်းလမ်း (Triangle of Life) ဆိုသည်မှာ ငလျင်ကြီးများ လှုပ်ခတ်ချိန်တွင် အသက်ရှင်နိုင်အောင် မည်သို့မည်ပုံပြုမူနေထိုင်ရမည်ဆိုသော အငြင်းပွားဖွယ် သီအိုရီတစ်ခု ဖြစ်ပြီး အီးမေးလ်များမှ တဆင့် ဖြန့်ဝေလျက်ရှိကြသည်။ ဤသီအိုရီသည် ထင်ရှားသော အဖွဲ့အစည်းများမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံကျင့်သုံးနေသော "ဝပ်ချ၊ အကာအကွယ်ယူ၊ ကိုင်ထား" (drop, cover, and hold on) ဟူသည့် အကြံပြုချက်နှင့် များစွာကွဲလွဲလျက် ရှိနေသည်။ ငလျင်ကြီးတစ်ခု လှုပ်ခတ်ပါက အဆောက်အဦများတွင် နေထိုင်သူများအနေဖြင့် အဆောက်အဦ ပြိုကျလာပါက ဒဏ်ရာမရစေရန် သို့မဟုတ် အသက်ရှင်စေနိုင်ရန်အတွက် ခိုင်မာသော အရာဝတ္ထုများအနီးရှိ အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည့် နေရာများကို ရှာဖွေ နေရာယူသင့်ကြောင်း နှင့် အထူးသဖြင့် စားပွဲခုံအောက်များတွင် အကာအကွယ် မယူသင့်ကြောင်း ဤနည်းလမ်းကို ကြံဆတီထွင်သူနှင့် အဓိက ထောက်ခံအားပေးသူ ဒေါက်ကော့ပ် (Doug Copp) က အကြံပြုထားသည်။
"အသက်ကယ်တြိဂံ" သီအိုရီသည် "လွဲမှားသော အတွေးအခေါ်" တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အဆောက်အဦတစ်ခုလုံး မပြိုကျနိုင်သော ခေတ်မီအဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်မှု စနစ်များရှိသည့် နိုင်ငံအများစုအတွက် မသင့်လျော်ကြောင်းကို အမေရိကန် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ပထဝီဝင် မြေတိုင်းအဖွဲ့ အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်း အများစုက တရားဝင် ဝေဖန်ပြောဆိုထားကြသည်။
ကော့ပ် ၏ သီအိုရီအရ အဆောက်အဦများ ပြိုကျသည့်အခါ၊ ပြိုကျလာသည့် နံရံအမိုး၊ မျက်နှာကြက်များ၏ အလေးချိန်သည် အောက်ရှိ အရာဝတ္ထုများ သို့မဟုတ် ပရိဘောဂများ၏ အပေါ်တည့်တည့်သို့ ကျရောက်ခြင်းကြောင့် အောက်တည့်တည့်ရှိ အရာဝတ္ထုများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ သို့သော် အောက်ရှိ ကျန်ရှိနေသော အရာဝတ္ထု၏ အမြင့်သည် ပြိုကျလာသော မျက်နှာကြက်ကို ရက်မသဖွယ် ပင့်ခံထားပြီး မျက်နှာကြက်ကို လျောကျစေနိုင်ပြီး ဘေးတွင် နေရာလွတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကော့ပ် က အသက်ရှင်နိုင်မည့် ယင်းနေရာလွတ်ကို အသက်ကယ်တြိဂံ ဟု အမည်ပေးထားသည်။ ယင်းအရာဝတ္ထု ကြီးမားတောင့်တင်းလေ၊ ဖိမိပျက်စီးရန် အခွင့်အလမ်း နည်းလေဖြစ်ပြီး ဘေးဖက်ရှိ နေရာလွတ်သည်လည်း ပိုမိုကြီးမားလေ ဖြစ်သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်] ယင်းကဲ့သို့သော တြိဂံများသည် အဆောက်အဦများ ပြိုကျပျက်စီးရာတွင် အများဆုံး တွေ့ရသော ယေဘုယျ ပုံသဏ္ဌာန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ပထဝီဝင် မြေတိုင်းအဖွဲ့ (United States Geological Survey (USGS)) က အသက်ကယ်တြိဂံသည် ငလျင်လှုပ်နေစဉ်အတွင်း လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက အကာအကွယ်ယူရန် ကြိုးပမ်းမည့် အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုအတွက် နည်းလမ်းအမှားများ ပေးနေသည်ဟု ဆိုသည်။ ငလျင်လှုပ်နေစဉ်အတွင်း (ကြီးမားလေးလံသော အရာဝတ္ထုများအပါအဝင်) အရာဝတ္ထုများသည် ပတ်ပတ်လည် လှုပ်ရှားနေနိုင်သောကြောင့် ယင်းတြိဂံများ မည်သည့်နေရာတွင် ဖြစ်ပေါ်မည်ဆိုသည်ကို မှန်းဆရန် အမှန်တကယ် ခက်ခဲနိုင်ကြောင်းကို ဝေဖန်သူများက ထောက်ပြပြောဆိုကြသည်။ ထို့အပြင် ကြီးမားလေးလံသော အရာဝတ္ထု၏ ဘေးဖက်တွင် လဲလျောင်းနေခြင်းသည်လည်း အန္တရာယ်ရှိကြောင်းကိုလည်း စောတကတက်ကြသည်။ ငလျင်ကြောင့် သေဆုံးမှုများကို လေ့လာထားသည့် အချက်အလက်များအရ အရာဝတ္ထုများ ပြိုကျခြင်းကြောင့် သေဆုံးရခြင်းနှင့် ဒဏ်ရာရမှုများသည် အဆောက်အဦ ဖွဲ့စည်းမှုများ ပြိုကျခြင်းကြောင့်ထက် ပိုမို များပြားသည်။
အလားတူ ငလျင်လှုပ်မည်ကို ကြိုတင်သတိပေးနိုင်ခြင်း မရှိထားသည့်အတွက် ငလျင်လှုပ်နေစဉ်အတွင်း လူတစ်ဦးသည် လုံခြုံသော ပရိဘောဂနေရာတစ်ခုခုတွင် ချက်ချင်း အကာအကွယ်ယူနေခြင်းထက် လှုပ်ရှားနေရန် ကြိုးပမ်းခြင်းက ပိုမို ဒဏ်ရာရစေနိုင်သည်။ မတူညီသော နိုင်ငံများရှိ မတူညီသော အဆောက်အဦ စံပြုသတ်မှတ်ချက်များကြောင့် ငလျင်လှုပ်စဉ် အသက်ရှင်နိုင်မည့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းသည် ကွဲပြားနိုင်သော်လည်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအတွက် "ဝပ်ချ၊ အကာအကွယ်ယူ၊ ကိုင်ထား" နည်းလမ်းကို အကြံပြုထားသည်။
နည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးကို အသေးစိတ် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ထားသည့် အီရန်ဆောင်းပါးတစ်ခုတွင် အကာအကွယ်အောက်တွင် ရှိနေသူများ အထိုက်အလျောက်သည် အီရန်နိုင်ငံကဲ့သို့သော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် သေဆုံးမှုများနှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ လျော့နိုင်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသည်။ "ဝပ်ချ၊ အကာအကွယ်ယူ၊ ကိုင်ထား" နည်းလမ်းသည် အဆောက်အဦများ အလုံးစုံ မပြိုကျနိုင်သော ငလျင်ငယ်များနှင့် တွေ့ကြုံရသည့် လူများအတွက် အသုံးဝင်သော အကြံပြုချက်ဖြစ်ပြီး ငလျင်ကြောင့် အသက်ရှင်နိုင်သူ များပြားသည်ဟု ထောက်ပြပြောဆိုထားသည်။ "အသက်ကယ်တြိဂံ" နည်းလမ်းသည် ငလျင်ကြီးများ လှုပ်ချိန်တွင် (သစ်သား သို့မဟုတ် ကွန်ကရစ်) အဆောက်အဦများ ပုံကျပြိုကျချိန်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နည်းလမ်း ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ကြီးမားသော အရာဝတ္ထုများ ယိမ်းယိုင်နေခြင်း၊ အလျားလိုက် ရှိနေသူအား ပိမိနိုင်ခြင်းနှင့် အသက်ရှင်နိုင်မည့် နေရာ မည်သည့်နေရာတွင် ဖြစ်ပေါ်မည်ကို ခန့်မှန်းရ ခက်ခဲခြင်းတို့ကြောင့် အသက်ကယ်တြိဂံနည်းလမ်းသည် သင်ကြားလမ်းညွှန်ပြသနိုင်ရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အဆောက်အဦများ မပြိုကျနိုင်သည့် အခြေအနေတွင် "အသက်ကယ်တြိဂံ" နည်းလမ်းကို လိုက်နာသူများအဖို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်ကြောင်း ကောက်ချက်ချထားသည်။ အီရန်နိုင်ငံရှိ ရွံ့အုတ်များဖြင့် ဆောက်လုပ်မှုများသော ကျေးလက်ဒေသရှိ လူဦးရေအများစုအတွက် မည်သည့်နည်းလမ်းကမှ အသုံးတည့်နိုင်ခြေ မရှိပေ။ ရိုးရှင်းသော သင်ကြားခြင်း၊ နှင့် ငလျင်ငယ်များနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများသည် ၁၂,၀၀၀ ဆ ကြုံတွေ့နိုင်သည့် အချက်များကြောင့် "ဝပ်ချ၊ အကာအကွယ်ယူ၊ ကိုင်ထား" နည်းလမ်းသည် ငလျင်လှုပ်နေစဉ်အတွင်း ပိုမိုရွေးချယ်သင့်သော နည်းလမ်းဖြစ်နေဆဲဟု ကောက်ချက်ချထားသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ကော့ပ်သည် ခေတ်မီစာသင်ကျောင်းနှင့် နေအိမ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး လူပုံစံတူ အရုပ် ၂၀ ဖြင့် နေရာချကာ သူ၏ နည်းလမ်းကို သက်သေပြထားသည့် ရုပ်ရှင်တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ အဆောက်အဦများကို ငလျင်ပုံစံတူ ကိရိယာများဖြင့် ထောက်တိုင်များ ဖြိုချခဲ့သည်။ လူပုံစံတူအရုပ်တစ်ဝက်သည် "ဝပ်ချ၊ အကာအကွယ်ယူ" ပုံစံဖြင့် ရှိနေပြီး ကျန်အရုပ်များကို ကော့ပ်၏ "အသက်ကယ်တြိဂံ" ပုံစံဖြင့် နေရာချခဲ့သည်။ ကော့ပ်နှင့် သူ၏ အဖွဲ့သားများ အဆောက်အဦအတွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ချိန်တွင် "ဝပ်ချ၊ အကာအကွယ်ယူ" ပုံစံဖြင့် နေသူများတွင် အသက်ရှင်နိုင်သူ မရှိနိုင်ဟု တွက်ချက်ခဲ့ပြီး အမာခံအရာဝတ္ထုများ ဘေးတွင် ရှိနေသူများကို ၁၀၀% အသက်ရှင်နိုင်သည်ဟု တွက်ချက်ပြခဲ့ကြသည်။ "ဝပ်ချပြီး အကာအကွယ်ယူတဲ့သူတိုင်းဟာ အဆောက်အဦပြိုကျချိန်မှာ ပိမိပြီး ခြွင်းချက်မရှိ သေဆုံးကြသည်" ဟု ကော့ပ်က သူ၏ နည်းလမ်းအရေးပါပုံကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ဝေဖန်သူများက ဤသည်မှာ စမ်းသပ်မှု တစ်ခုထက် ကယ်ဆယ်ရေး လေ့ကျင့်မှုသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထို့အပြင် ဤလေ့ကျင့်မှုတွင် ငလျင်များကဲ့သို့ ဘေးတိုက် ရွေ့လျားလှုပ်ခတ်မှုကို မထည့်သွင်းထားဘဲ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများတွင် တွေ့ရခဲပြီး အလွန်ညံ့ဖျင်းသော ဆောက်လုပ်မှုများတွင်သာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည့် pancake collapse ခေါ် အလုံးစုံပြိုကျမှုကိုသာ ဖန်တီးခဲ့သည်။ သို့အတွက်ကြောင့် ကော့ပ်၏ ရလဒ်များသည် လွဲမှားနေသည်ဟု ဝေဖန်မှုက ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
↑ Alaska Red Cross, "Drop, Cover, and Hold On!" Archived 19 January 2013 at the Wayback Machine., accessed3January 2013.
↑ Government of New Zealand, "Drop, cover and hold still the best advice" Archived 24 November 2011 at the Wayback Machine. Error in webarchive template: Check |url= value. Empty.
↑ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization "protect yourself from falling debris by hiding underastrong table or structure"
↑ "'Safe practice' urged for earthquake preparedness", Hazard Management Cayman Islands (HMCI) spokesperson
↑ "ODPEM dismisses quake tips from Doug Copp", Jamaica Observer, 29 January 2010, accessed3January 2013
↑ United States Geological Survey What is the "Triangle of Life" and is it legitimate?5October 2012, accessed 22 July 2013
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ Petal, Marla, Douglas Copp - Worse Than Urban Legend: Dangerous Advice! And Now For Some Good Advice For Earthquake Safety, September, 2004, accessed3January 2013.
↑ Lopes, Rocky. American Red Cross response to "Triangle of Life", accessed3January 2013, quote: "The Red Cross is not saying that identifying potential voids is wrong or inappropriate. What we are saying is that "Drop, Cover, and Hold On!" is NOT wrong—in the United States. The American Red Cross, beingaU.S.-based organization, does not extend its recommendations to apply in other countries. What works here may not work elsewhere."
↑ Copp၊ Doug။ American Rescue Team Survival Magazine Article။ The American Rescue Team International။ 2010-03-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသက်ကယ်တြိဂံ&oldid=638617" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။